Tattoo dibiga: fikrado dibiyo leh dhammaan dhadhanka | tattooists
Tattoo dibiga: fikrado leh dibi dhammaan dhadhanka
Ma aha Cherry | 11/04/2022 19:24 | Tattoos Xayawaan ah
Tattooyada dibiga ayaa leh xayawaan qurux badan, oo leh maqaar dhalaalaya iyo geeso fiiqan, Kaas oo ay u wanaagsan tahay in aan ka maqlo meel fog haddii aynaan rabin in aan cabsi ka helno qaabka Félicité ee jecel, kaas oo sidoo kale ah jilaagii sheekada quruxda badan ee Flaubert "Wadnaha Fudud".
Maanta dhab ahaantii waxaan ka hadli doonaa dibida tattoos, taas oo ah, oo leh dibi sida geesiyaal, laakiin iyada oo aan la gelin xayawaanka duurjoogta ah ee dibi-jirrada xun, tan iyo markii aan ka hadli doono macnaha iyo qarsoodiga xayawaankan waxaanan ku siin doonaa fikrado dhowr ah si aad uga faa'iidaysato tattoo. By habka, haddii aad rabto in aad ogaato wax badan, ha ilaawin inaad booqato this article kale oo ku saabsan dibi tattoos.
1 Dibigu calaamad ahaan
2 Fikradaha Tattoo Dibi
2.1 dibida dhabta ah
2.2 tattoo Taurus
2.3 dhafoor dibi
2.4 Tattoo dibi dhallaan oo qurxoon
2.5 torus joomatari
2.6 dibida majaajilada ah
2.7 Qaraabada dibiga
3 Sawirada tattoo-dibiyeedka
Dibigu calaamad ahaan
In badan ama ha yaraato waxaynu wada garanaynaa waxa uu dibi yahay: waa labka saca aan la shubin, waxa u dheer, waxa lagu gartaa in uu haysto dabeecad ka daran tan iyo jirka oo aan aad u jilicsanayn, laakiin ka muruq badan iyo, marka la soo koobo, guud ahaan dabeecad xun. (inkasta oo halyeyga ah in midabka casaanku uu ka xanaaqo waa wax aan ka badnayn khuraafaad, tan iyo dibi, oo aan awoodin inay fahmaan midabada casaanka iyo cagaarka, sida tiro badan oo naasley ah, waxa dhibaya iyaga waa dhaqdhaqaaq).
Inaga oo sii amba qaadaya astaanta xayawaankan, sida aynu ku sheegnay maqaalkii aynu kor ku soo xidhnay. dibigu waxa uu astaan ​​u yahay awooda xayawaanka ee lagu furay dhaqamo badanDhab ahaantii, dhaqanka Ameerikaanka asalka ah, madaxyada dibidu waa calaamad gaar ah oo xoogga ah.
Xaqiiqdii, dibiga calaamad ahaan, iyo gaar ahaan sida ilaahnimada ama xayawaanka xurmada leh, ayaa la isticmaalayey ugu yaraan 17.000 oo sano., taas oo ah wakhtiga rinjiyeynta Lascaux, oo ah tii ugu horreysay ee loo yaqaanno xayawaankan quruxda badan, ayaa la taariikheeyay. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa in dhaqamo kale oo badan oo qadiimi ah, oo aan ahayn oo kaliya calaamad u ah xoogga, laakiin bacriminta, tusaale ahaan, marka Zeus uu afduubo Europa si uu ugu kufsado qaab dibi cad.
Nasiib darrose, dibida masaakiinta ah ayaa sidoo kale ku dhibtooday gacmaha dadka tan iyo bilowgii wakhtiga: marka laga soo tago dibi-dagaalyada foosha xun, oo ah bahalnimo aan la macnayn karin ilaa maanta jirta, ama dibida Embolaos, ama Sanfermines, qofka bini'aadamka ah wuxuu muujiyay sida loogu quudhsado ciyaaraha been abuurka ah ee ay ka mid yihiin dibida cunista, taas oo aad looga jecel yahay Ingiriiska ilaa iyo hadda. kaas oo nasiib wanaag la mamnuucay 1835, kaas oo xidhmo eeyaha ah lagu soo bandhigay dibi xanaaqsan (sida, tani waa meesha magaca bulldog ka yimid).
Fikradaha Tattoo Dibi
In uu yahay xayawaan leh khuraafaad iyo astaan ​​u badan, dibigu wax badan ayuu naftiisa ku bixiyaa tattoo. Aan aragno, tusaale ahaan:
dibida dhabta ah
Waxa ugu horreeya ee maskaxda ku haya markaad ka fikirto tattoos dibi waa, dabcan, dibi macquul ah. Dhamaadka xayawaankani wuxuu leeyahay firfircooni u muuqda mid aad u fiican tattoo qaabkanIntaa waxaa dheer, midab madow, madow iyo caddaan ayaa si fiican ugu habboon dibida. Haddii aad doorato qaabkan tattoo, waxaad dooran kartaa pizza weyn, laakiin sidoo kale kaliya tattoo madaxa xayawaanka, oo ah midka ugu caansan ee dibida.
Haddii aan ka hadalno tattoos-dibiyeedka, ma ilaawi karno Taurus, mid ka mid ah calaamadaha zodiac ee heer sare. Madax adag, xoog leh oo leh fikrado go'an, la noolaanshaha Taurus ma fududa (waxaan tan ka idhaahdaa waayo-aragnimada) laakiin ugu yaraan maaha mid caajis ah. Sidaa darteed, haddii aad Taurus tahay oo aad rabto inaad muujiso daacadnimadaada calaamaddaada zodiac, waxaad dooran kartaa dibi, haa, laakiin sidoo kale calaamadeeda, mid wareegsan oo geeso leh.
Kahor intaanan nidhi in dhafoorrada dibidu ay yihiin mid ka mid ah astaamaha heerka ugu sarreeya ee dadka Maraykanka u dhashay si ay u matalaan xoogga, taasina waa sababta ay caan u tahay. arag tattoos noocaan ah oo ay la socdaan walxo ay ka mid yihiin baalal, qaansooyin iyo fallaadho, ulo, muuqaalo saxare ah ama riyo qabad. Shaki la'aan, tattoos skull tattoos waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican qaab macquul ah, inkasta oo aysan meesha ka saarin qaababka kale sida mid dhaqameed ama xitaa siin midabka midabka.
Tattoo dibi dhallaan oo qurxoon
Tattooyada dibiga ma aha oo kaliya inay muujin karaan xayawaankan si buuxda, laakiin sidoo kale noocyo kale oo qurux badan, tusaale ahaan, dibi ilmo. Waxay noqon kartaa hab aad u wanaagsan oo lagu sharfo ilmaha oo aad rajaynayso inuu ku dhasho caafimaad iyo xoog, tusaale ahaan. Sida macnaheeda yahay. waa tattoos lagu matali karo si dhab ah iyo taabasho caruurnimo labadaba ama xataa cartoon.
Waxaan horay u sheegnay in tattoo-yadani ay yihiin kuwo aad u badan, sidaas darteed maahan wax la yaab leh in taabashada joomatari ay sidoo kale ku habboon tahay iyaga. Waxaad samayn kartaa joomatari oo aan si buuxda ugu dhex milmin naqshadaynta, laakiin sidoo kale isku dar si aad u dareento in uu yahay sawir-gacmeed. Sidan waxaad ku siin kartaa dhaqdhaqaaq aad u gaar ah qaybta taas oo, habka, u muuqata mid madow iyo caddaan ah.
dibida majaajilada ah
Oo waxaan ku sii wadeynaa qaabab kale oo qiraya fursado badan oo xayawaan ah, taas oo sidoo kale kuu ogolaanaya inaad siiso maroojin badan oo male-awaal ah naqshadeynta, sida sawirka, kaas oo aan ku aragno isku-dhafka deerada iyo dibiga. U fiirso faahfaahinta si gabalkaagu u sameeyo isbeddel: halkan midabku waa fikrad aad u fiican, tan iyo markii ay u ogolaato in la muujiyo muujinta ba'an ee xayawaanka leh indho cas oo daran, iyo sidoo kale dhogorta.
Waana dhamaynay adigoon dhinacna uga tagin qaraabada kale ee ninkan xoogga badan, tusaale ahaan, gisiga, dibida iyo bisinka. Dhammaantood waxay wadaagaan qudhaanjada madaxa, inkastoo mid kastaa uu leeyahay calaamad iyo macne u gaar ah.
Tattooyada dibida iyo dibigu waxay bixiyaan wax badan oo naftooda ah waxayna yihiin kuwo aad u badan, sida aad ku aragtay dhammaan naqshadahan. Noo sheeg, ma ku leedahay tattoo xayawaankan? Maxay kuu astaan ​​u tahay? Ma kula tahay inaan wax macno ah uga tagnay inaan faallo ka bixinno?
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos Xayawaan ah » Tattoo dibiga: fikrado leh dibi dhammaan dhadhanka
Kareemka tattoo: waxa ugu fiican ka hor iyo ka dib tattoo
Pink Floyd tattoos, fikradaha maskaxda ee maqaarkaaga